Izinto Ezibangela Umdla NgeKyrgyzstan
Izindlu abahlala kuzo kwiNtlambo iTash Rabat
IKYRGYZSTAN ingqongwe ziintaba ezinekhephu kuMbindi Asia, yaye ijikelezwe yiKazakhstan, iUzbekistan, iTajikistan neTshayina. Phantse lonke eli lizwe ligcwaliswe ziintaba. Eyona ntaba iphakamileyo kwiiNtaba zeTian Shan iseKyrgyzstan. Akukho mahlathi maninzi kangako kwelo. Ngoko ibangel’ umdla into yokuba ehlabathini lonke, eyona mithi mininzi yendongomane elibizwa ngokuba yiwalnut ifumaneka kuloo mahlathi.
AmaNgqina kaYehova afundisa amawaka abantu baseKyrgyzstan iBhayibhile
Abantu beli baziwa ngokuthand’ iindwendwe nangembeko. Bathetha ngembeko nabantu abadala kunabo, babancamela izitulo zabo kwizithuthi zikawonke-wonke, ibe babanika ezona zihlalo zibalulekileyo etafileni.
Ngokuqhelekileyo, abantu baba nabantwana abathathu nangaphezulu. Oyena nyana umncinci akemki ekhaya naxa sele etshatile ukuze anyamekele abazali.
Abantwana abangamantombazana bafundiswa besebancinci imisebenzi yasekhaya ukuze bakwazi ukuba ngabafazi ngeny’ imini. Bathi bengekabi neminyaka eyi-20 babe sebeyenza kakuhle. Xa ke intombi itshata, iye inikwe isipho. Sidla ngokuba zizinto ezininzi ezinjengezinto zebhedi, iimpahla nekhaphethi eyenziwe ngezandla. Umyeni ubhatala ilobola, ngemali nangemfuyo.
Xa kukho itheko okanye umngcwabo, kuye kuxhelwe igusha okanye ihashe. Le nyama iye yahlulahlulwe aze mntu ngamnye anikwe emfaneleyo. Ekubeni abantu balapha benembeko, abantu bayinikwa ngokweminyaka nezikhundla zabo. Emva koko, banikwa ukutya okudumileyo apho, ibeshbarmak, ibe bakutya ngezandla.
Ikomuz sisixhobo somculo esaziwayo apho
Incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? iyafumaneka ngesiKirghiz ibe ikho naku-www.jw.org/xh
Abemi: 5 776 000
Ulwimi: IsiKirghiz nesiRashiya
Imveliso: Icotton, iwulu, igolide, imekyuri neuranium
Unqulo: Uninzi ngamaSilamsi